प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : सिन्धुलीका २ हजार युवाले रोजगारी पाउँदै (पारिश्रमिक कति ?) | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश ०३ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : सिन्धुलीका २ हजार युवाले रोजगारी पाउँदै (पारिश्रमिक कति ?)
on: June 12, 2019 प्रदेश ०३, प्रदेश समाचार
जेठ २९, सिन्धुली । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सिन्धुलीका करीब २ हजार जना युवाले १५ दिने रोजगारी पाउने भएका छन् । जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म एउटाले मात्रै रोजगारी कार्यक्रम शुरु गरेका छन् भने ८ स्थानीय तहले अझै शुरु गर्न सकेका छैनन् । बजेट ढिलो गरी आएको र कार्यालय प्रमुखहरुको बेवास्ताका कारण निर्णय गर्न ढिलो भएकाले कार्यक्रम ढिलो शुरु भएको ती स्थानीय तहका अधिकारीले बताएका छन् । ती ८ तहमध्ये अधिकांशले असारको पहिलो साताबाट युवालाई रोजगारी दिने तयारी गरेको बताएका छन् ।
एक महीनाभित्र खर्च गर्न करोडौंको बजेट, सकेसम्म गर्दै जान्छौं : राजन ढकाल